Hiddi sassaabdota kiraa akka hin gogneef hudhaa kan ta’e maali?
Olaantummaan seeraa haalaan mirkanaa’uu dhabuu wajjin walqabatee aanga’oonni mootummaa quuqama lammii hinqabne imaanaa isaanitti laatame bakkeetti gatuun faayidaa dhuunfaaf olii gadi fiiguusaaniirraa kan ka’e qabsoon cimaa hawaasa bal’aa gamaaf gamanaa dhohuu danda’eera.
Hiddi rakkoo hawaasa bal’aa ta’e kun maal akka ta’e biragahuuf sochiin haaromsa gadi fagoo hojiirra ooluusaan jijjiiramni akka dhufuuf hojii hojjetameen fooyya’insi argame hanga tokko hawaasa garaa ga’uu danda’eera.
Kun ta’us qaamonni gocha sassaabdummaa kiraarratti bobba’an kunneen bakka jiranitti to’achuus ta’e adabbiin barbaachisu irratti fudhatameera jechuun hindanda’amu. Hanguma xiyyeeffannoon sassaabdota kiraarratti taasifamu isaanis tooftaafi kallattii isaanii jijjiiruun hojii saamichaa karaa dhoksaan kan itti fufan ta’us ija uummata bal’aa jalaa dhokachuu hindanda’ani.
Keessumattuu umriin sassaabdota kiraa akka dheeratuuf sababa ta’aa kan jiru ‘neetwoorkii’ sassaabdummaa kiraa gubbaadhaa kaasee hanga dakaatti jiru ciruu dhabuudha. Neetwoorkii kana ciruun ammoo kutannoo siyaasaa walirraa hincinne taasifamuu kan qabu yoo ta’u, keessumaaa hoggantoonni mootummaa imaanaa uummataa baatan quuqama lammii isaaniif qaban agarsiisuuf of kennanii hojjechuu qabu.
Kuni ta’us gochaan ofittummaa sassaabdota kiraa olaanoon raawwatu kallattii isaa jijjiiree waan itti fufuuf hawaasni abbaa qabeenyaa ta’e fayyadamummaasaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo barbaachisaa kennuufii qaba.
haaromsa gadi fagoo yeroo ammaa taasifamaa jiruun bu’aaleen galmaahaa jiran jajjabeessaafi daandiiwwan saamicha sassaabdota kiraa cufaa kan jiru yoo ta’u, kanaanis hoggantoota kutaannoon hojjechuun itti quufinsa hawaasaa qabatmaan mirkaneessan hedduu horachuun danda’ameera.
Hoggantoonni yeeroo ammaa jiran hedduun aangoof osoo hintaane uummataaf kan jiraatan ta’uu qabatamaan agarsiisuuf carraaqqii guddaa taasisaa jiru. Haata’u malee hogganaan ammallee fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hin hojjenneefi deggaraa sassaabdota kiraa ta’an sochii hawaasni bal’aan taasisaa jiruun tarkaanfiin sassaabdota kiraa irratti fudhatamus jabaachaa jira.
Sassaabdonni kiraa hawaasa bal’aa saamaa of dhoksanii jiraachuu jiraachuu hindanda’an. Kanaafuu badii gaaga’ama dinagdeefi siyaasaa qaqqabsiisaa jiru kanarraa of qusachuu qabu. Qabeenyi ummataafi mootummaa kanaan dura sababuma kanaan saamamaa tures deebi’aa jira.
Qaamoleen ammayyuu gochaa kanarratti bobba’anii jiran umrii isaanii dheerefachuuf kufanii ka’aa kan jiran yoo ta’us qabsoon mootummaafi hawaasni gocha badaa kanarratti taasisaa jiru kana caalaatti cimee itti fufuu qaba. Humnoonni badii kana gaggeessan hedduun tokkummaa lammiilee labsuurra qaawwa xixiqqaa funaanuun lammii kaleessa dheengadda nagaan waliin jiraachaa ture walitti buusuun ergamsaanii bahachuuf carraaqaa kan jiran yoo ta’u dammaqanii eeggachuuf miira tokkummaa walii cimsuun furmaatadha.
Walumaagalatti, umriin sassaabdota kiraa akka dheeratuuf sababa kan ta’e neetwoorkii gaaraa hanga dakaatti ijaaramee jiru ciramuu dhabuufi garaagaraummaa xixiqqaa lammiilee gidduutti uumu akka meeshaatti itti fayyadamaa jiraachuu isaanii waan ta’eef umrii isaanii gabaabsuuf hoggantoota kutannoon gocha badaa kanarratti duulan kumaatamaan horachuun barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 11160
Torban darbe/This_Month 97517
Guyyaa mara/All_Days 1435940